Margarekha १४ औं महाधिवेशनमा कोहलपुरका तरुणहरू ‘दाइको गुट’मा बाँडिने कि एकजुट हुने ? – Margarekha
१४ औं महाधिवेशनमा कोहलपुरका तरुणहरू ‘दाइको गुट’मा बाँडिने कि एकजुट हुने ?
नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन २०७७ साल फागुन ७ गतेबाट सुरु हुने कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ । महाधिवेशनका लागि वडा देखी केन्द्र स्तर सम्म क्रियाशील सदस्यता वितरण लगायतका अभ्यास सुरु भइसकेका छन् । यसैले सबैको ध्यान नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनतिर तानिन थालेको छ ।
कांग्रेस मुलुककै सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी हो । कांग्रेसले महाधिवेशन मार्फत् लिने नीति तथा कार्यक्रमले समग्र नेपाली जनता र मुलुकको भविष्य निर्धारणमा प्रभाव पार्नसक्छ । त्यसकारण पनि कांग्रेसको महाधिवेशनप्रति जनचासो हुनु स्वाभाविकै हो । कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन नीति तथा कार्यक्रमका दृष्टिले त महत्वपूर्ण छँदैछ अझ महत्त्वपूर्ण अर्को पक्ष नेतृत्वको पनी देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले युवा अवस्थामा नै नेपाली कांग्रेस पार्टीको स्थापना गरेका थिए । बीपी कोइराला ३५ वर्षको उमेरमा पार्टी सभापति र ४३ वर्षको उमेरमा देशको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । नेपाली कांग्रेस पार्टी स्थापना हुँदा यसका संस्थापक पनि सबै जुझारु युवा थिए ।
चौधौं महाधिवेशनको रौनक सुरु भएसँगै कांग्रेसभित्र फेरि युवा नेतृत्वको विषयले प्रवेश पाउने वा नपाउने विषय निकै चर्चामा आएको छ । नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा ७४ वर्षका भए । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल ७५ वर्षका भए । महामन्त्री डा. शशांक कोइराला ६१ वर्षका भए भने नेता कृष्णप्रसाद सिटौला ७१ वर्षका भए । कांग्रेसको नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरु ६० वर्ष माथी कटिसकेका छन् । अहिले सम्म पार्टीलाई विगत लामो समयदेखि ६० माथिको पुस्ताले नेतृत्व गरिरहेको छ । यद्यपि, नेपाली कांग्रेस निर्माणमा उनीहरुको विशेष भूमिका थियो । तर, यसको अर्थ अभिभावकको भूमिकामा बस्ने बेलामा नेतृत्वमै टाँसिनुपर्छ भन्ने पनि त होइनहोला नी ।हुनत, उमेरले नभएर विचारले युवा हुने हो भन्ने तर्क पनि आउँछ । केही हदसम्म त्यो सही पनि हो । जोसिलो प्रगतिशील विचार ६० कटेका नेताले राख्दैनन् भन्ने होइन । व्यक्ति बूढो हुँदैमा बिचार र नीति पनि पुरातन नै हुन्छ भन्ने त छैन । तर के नेपाली कांग्रेसभित्र त्यस्तो अवस्था छ त ? सबैले एकपटक गम्भीर भएर सोच्न जरुरी देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्व पंक्तिले न कुनै कार्यक्रम दिन सकेको छ न त कुनै कार्यदिशा नै छ । पार्टीको भिजन र मिसनलाई तिव्र गति दिन नसकिएको आम कार्यकर्ताहरुको प्रश्न रहेको छ । अब देउवा, पौडेल, सिटौलालगायतको पुस्ताले विश्राम गर्नुपर्छ । पार्टीमा अब युवा नेतृत्व स्थापित हुनु आवश्यक छ ।
कांग्रेसभित्र कैयौं सक्षम र आशालाग्दा युवा नेतृत्वमा आउन सुयोग्य छन् । के उनहरु सबैलाई ६० कटेको पुस्ताको पछि लगाएर तिनको सिर्जनशीलता र ऊर्जा मारिरहने हो ? अहिले पनि नेपाली कांग्रेसमा डा. चन्द्र भण्डारी, विश्वप्रकाश शर्मा, धनराज गुरुङ, गगन थापा, गुरु घिमिरे, बद्री पाण्डे, प्रदीप पौडेल, महेन्द्र शर्माजस्ता आशालाग्दा तरुण छन् । तिनले यो पार्टी र देशका लागि आफ्ना विचारद्वारा परिवर्तन ल्याउन सक्छन् भन्ने कम्युनिस्टहरु पनि स्वीकार गर्छन् । यी बाहेक पनि धेरै आशा लाग्दा युवा नेता कांग्रेसमा छन् । सबैको नाम उल्लेख गरिरहन संभव भएन । यसको मतलब के हो भने कांग्रेसलाई नेतृत्व गर्न सक्षम तरुणहरुको एउटा ठूलो पुस्ता तयार भइसकेको छ । त्यसकारण अब युवालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिले अब यस विषयमा सोच्नु आवश्यक छ । सधैँ फलानो दाइ भनेर पछि लाग्नुको साटो अब सोच विचार गरेर युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न आवश्यक छ । यसका लागि कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा तत्लो तहबाटै व्यापक मात्रामा तरूणहरु निर्वाचित भएर आउन जरुरी छ । देशभर युवाको पक्षमा माहोल बनाउन सकियो भने असंभव पनि छैन ।
अहिले युवा भनेका नेता पनि कुनै न कुनै दाइको गुटमा छन् । उनीहरु त्यस्ता गुटबाट बाहिर निस्केर समग्र युवाको हितमा बोल्ने आँट गर्लान् ? नेतृत्वमा हस्तक्षेप गर्ने आँट गर्लान् ? भन्ने विषय शंकाकै घेराभित्र छ । तैपनि, कांग्रेसभित्र युवा नेतृत्वको बहस समग्र पार्टीको परिवेशलाई नबुझी चलाइएको हैन । घेराबाट निस्केर आउन गाह्रो अवश्य होला तर इच्छाशक्ति भए असंभव चाहिँ छैन ।
कांग्रेसका युवा नेता अब एक ठाउँमा उभिनु आवश्यक छ । नेतृत्वमा प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्ने हो भने तरुणहरू एक ठाउँमा उभिनुको विकल्प छैन । एक ठाउँमा उभिएर देशभर युवा नेतृत्वको पक्षमा वातावरण नबनाउने हो भने फेरि पनि दाइहरुकै पछि लागेर नेतृत्वमा पुग्न ७० वर्ष पुग्ने दिन कुरेर बस्नुपर्नेछ । त्यसकारण चौधौं महाधिवेशन युवा नेताहरूका लागि परीक्षाको घडी पनि हो । यो परीक्षामा खरो उत्रिएर एकपटक महाधिवेशनमार्फत् युवा नेतृत्व स्थापनामा जोड दिऊँं । नेतृत्वमा को पुग्ला त्यसलाई महत्त्वपूर्ण विषय नठानौ । मूल कुरा युवा पुस्ता नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ भन्ने हो । आज एउटा युवा पुग्यो भने भोलि अर्को युवा पुग्छ । त्यसले गर्दा पार्टी गतिशील हुन्छ । विपक्षीसँग लड्न सजिलो हुन्छ । त्यसैले सबै युवा नेताले यस पटक यो या त्यो नभनी युवा नेतृत्व स्थापना अभियानमा समर्पित हुनु जरुरी देखिन्छ । अहिलेकै कांग्रेस नेतृत्वले सघाएर तरुण पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सके झनै सुनमा सुगन्ध हुने र पाटीपक्ति अझैँ मजबुध भएर जाने थियो । ६५ वर्षको काटेका नेताहरु अभिभावकीय भूमिकामा बस्दा नै उत्तम देखिन्छ । देशभरका तरुणहरूले अब कांग्रेसभित्र युवा नेतृत्वको अभियानलाई व्यापक बनाउन आवश्यक देखिएको छ । यसपटक महाधिवेशन मार्फत् युवा नेतृत्व स्थापित भयो भनेमात्र सही अर्थमा कांग्रेसले देशको नेतृत्व गर्न सक्छ । अर्थात्, कांग्रेसले एक पटक फेरि मुलुकको ठूलो पार्टी बनेर देशको नेतृत्व गर्न सक्छ । यसका लागि कांग्रेसको मूल नेतृत्व तहमा यही महाधिवेशनबाट तरुणहरुलाई पु¥याउनै पर्ने आजको आवश्यकता हो । कांग्रेसका युवाले हिम्मत गरुन् – दाइको गुट छाडेर एकजुट हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । दाइकै गुटमा बसिरहने हो भने युवाहरुको नेतृत्व गर्ने पालो आउँदैन नै पार्टी र देशको पनि भलो हुँदैन । तरुणहरूले साँच्चै नै आँट्ने हो भने असम्भव भने अवश्य छ ।
१५ श्रावण २०७७, बिहीबार १२:३१ प्रकाशित